How kusarudza Centrifugal pfapfaidzo Dryer nomazvo? - China Changzhou Daming Pharmaceutical Equipment
How kusarudza Centrifugal pfapfaidzo Dryer nomazvo?
Ani naani akashandisa midziyo iyi inofanira kuziva kuti Centrifugal pfapfaidzo Dryer unogona kuridza simba basa basa, kuomesa mwero ndiko kutsanya chaizvo, uye anogona pave risanyatsobuda, kazhinji kushandiswa kupisa anenge zvinodhaka nokuomesa kurapwa. Mukuwedzera, pfapfaidzo Dryer rinogona kushandiswa kugadzira microcapsules, uye anogona kuzadzisa zvakanaka kurapwa maturo. Saka sei isu kusarudza?
Chokutanga, kana kuita sarudzo, zui anogara kuenzanisa mhando akawanda akasiyana namano. Zvakakosha kuyeuka kuti unofanira kusarudza avo namano kuti asangane zvaunoda, zviri zvikuru kusimba pane marongerwo uye anoda zvishoma nzvimbo basa rakafanana.
Dambudziko rechipiri, apo tiri kunotenga pfapfaidzo dryers, ndiko kuti zui ari nani kutsvaka namano kuti vari kupfuura zvoga uye nyore kudzora. Nenzira iyi, zvichava nyore uye nyore kushandisa, zvinogona kuderedza uwandu dzaishandisa uye nokuponesa mari.
Chechitatu, tinofanira kusarudza midziyo pamwe hwakavimbika uye wakatsiga chaitwa, zvishoma simba zvinodyiwa uye yakakwirira kunyatsoshanda, saka kuti tinogona kubatsira nani tipedzise basa.
Chechina, vanozvishandisa vanofanira kutanga kuburitsa zvinodiwa zvavo zvomene, uyewo chaizvo zvinhu uye zvinhu zvivako, uye nechokwadi kuti kukura kamwene of yasarudzwa midziyo asangana zvinodiwa. Ndiko kuti, tinofanira kusarudza pfapfaidzo midziyo Dryer chingatibatsira kupedza basa zvakanaka.
Zvisinei, kunyange kana yakakodzera midziyo anosarudzwa, kungava zvinetso chaiko kushanda. Panguva ino, tinofanira kufunga kana pakaitika pfapfaidzo Dryer ane matambudziko, akadai kana zvokudya nokukurumidza, tembiricha marongero anonzwisisa, uye zvinoitwa acho, nezvimwewo, uye ipapo kuzodzosera kurigadziridza